Nepal Mamila | प्रधानमन्त्रीको प्रश्नः म राजीनामा पत्र लेख्दिनँ !, अदालतले मलाई राजीनामा देऊ भनेकाे छ र ? - Nepal Mamila प्रधानमन्त्रीको प्रश्नः म राजीनामा पत्र लेख्दिनँ !, अदालतले मलाई राजीनामा देऊ भनेकाे छ र ? - Nepal Mamila
प्रधानमन्त्रीको प्रश्नः म राजीनामा पत्र लेख्दिनँ !, अदालतले मलाई राजीनामा देऊ भनेकाे छ र ?
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले आफूले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन् । हिमालय टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहलगायत अन्य नेताहरुले माग्दैमा आफूले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका हुन् । नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन दबाब छ नि ? भन्ने पत्रकारकाे प्रश्नमा उनले मेरो नैतिकता के भयो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
‘मेरो नैतिकता के भयो ? मैले मेजोरिटी लुज गरें ? कसरी संवैधानिक घात भयो ? अदालतले के मा हरायो ? के अदालतले यस्तो अवस्थामा मलाई राजीनामा देऊ भनेकाे छ र ? मैले राजीनामा गर्ने हो भने अदालतको फैसलाले अस्थीरता निम्त्यिाएको देखिन्छ’, उनले भने ।
‘म राजीनामा पत्र लेख्दिनँ । मैले लेख्नुपर्ने अवस्था होइन छैन् । मैले अरु पनि बाटो समाउन सक्छु । आवश्यक परे विश्वासको मत लिन सक्छु । मलाई विश्वासको मतमा हराउनुपर्‍यो नि !’, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले आफूले राजीनामा नदिने बरु संसदमा फेस गर्न तयार भएकाले राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् ।